जुन घरमा गरिन्छ यी ४ काम, त्यहाँ हुन्छ लक्ष्मीको वास – MeroOnline Khabar
पश्चिम दिशा तर्फ मुख फर्काएर पुजा गर्नु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ। त्यस्तै मन्दिरको ढोका यदी पूर्व दिशामा भए छन् राम्रो हन्छ। प्रवेश द्धारको ठिक अगाडि ईश्वरको मुर्ति भने कहिलै राख्नु हुँदैन्। घरमा मन्दिरको स्थापना गर्दा सबै भगवानको कृपा मिल्ने विश्वास गरिन्छ।-
जीवनमा सबै मानिस उस्तै हुन् तर सफल मान्छे र असफल मान्छेले सोच्ने कुरा चेहि फरक हुने गर्दछ !
@एउटा असफल मानिसको सोच : दोकान त गर्ने हो तर लगानी छैन??? भने
@एउटा सफल मानिस : दोकान गर्ने भनेको लगानी छैन ??? कसरि मिलाउने होला ??
अन्त्यमा सफल मानिस : २ घण्टा धरै काम गरेर हुन्छ कि नया ठाउमा काम गरेर होस् उसले पैसा बनाएर नया दोकान खोल्छ भने एउटा असफल मानिस आफुनो सबै सोचहरु त्यही टुगो लगाउछन् !
#नोट : सोच बदल्नु होस् समय बदलिने छ ! सहि समय चिनौ र सहि सधुप्रयोग गर्न सिकौ !
घरमै बसेर काम गर्ने सकिने यो अवसरलाई सधुप्रयोग गरौ ! हाम्रो अहिले पनि अनलाईन ट्रनिगहरु चलिरहेको छ ! यो बिशेष गरि ति बेक्तिको लागि हो जुन, आफ्नो बिजनेश साथ पार्ट टाईम गर्न चाहान छन् र बेरोगार छन्, इन्टरनेटको राम्रो स्किल हुदा पनि काम पहिरहेको छैनन ! कुनै अनलाईनको काम खोजि राखेका लागि यो एउटा बेस्ट प्लात्फोर्म हुन सक्छ ! किन भने यस कम्पनीले सिक्ने र आर्य गर्ने प्लेटफर्म दिने गर्दछ !
← आफ्नै जेठाजु द्वारा अञ्जनाको बिभत्स हत्या गर्नुको कारण यस्तो रहेछ !
यस्ता व्यक्तिले उखुको जुस पिउन हुदैन →